Rehefa-varotra Service - Qunfeng tsaina fitaovana Co., Ltd.
Voahevitra sy haingana rehefa avy-fanompoana varotra dia manome fanohanana sy antoka ho an'ny tombontsoa.
◇ Alefaso ny teknisiana mba hanatanteraka ny fametrahana sy ny debugging ny fitaovana ho an'ny vahiny mpampiasa amin'ny onitra. Firenena na faritra amin'ny toe-draharaha ara-politika miovaova, na tao anatin'ny fanaintainana ady dia tsy tafiditra ao anatin'ny drafitra. .
◇ Ampio ny mpampiasa mba handidy ny fitaovana sy hitari-dalana azy ireo ho azo antoka famokarana.
◇ Hazavao ny mahazatra fikojakojana ny fitaovana tsara sy manala iombonana fahadisoana.
◇ isika rehetra tompon'andraikitra amin'ny ny fanamboarana izay nateraky ny kalitao ny olana iray ao anatin'ny taona Warranty. Accessories avy any ivelany amin'ny ankapobeny dia nanolotra ny DHL in orde mba hanome asa fanompoana ho an'ny mpanjifa vahiny avy hatrany.
◇ mpanjifa ny vahiny izay manana fanontaniana nanaraka-varotra fanompoana dia afaka mandefa mailaka mivantana ho an'ny voatondro mailbox. Dia hamaly ny fanontaniana ao amin'ny 12 ora sy hamaha olana isan-karazany ho an'ny mpanjifa ara-potoana.
◇ Ho an'ny sasany fivondronana izay sarotra hahazo visa, mpanjifa dia afaka ihany koa ny mandefa ny teknisiana ho an'ny orinasa mba hahazoana tari-dalana sy ny fampiofanana maimaim-poana.
◇ Ekeo ny soso-kevitra ho fanatsarana hatrany ny mpanjifa hametraka amin'ny fomba mafy. Araka ny miova ny tsena, manome ny vokatra sy ny tolotra hitsena ny mpampiasa zavatra ilaina sy ny mamorona fitsipika ho azy ireo.
◇ ny mpanjifa izay no vokatra passsed daty ny fiantohana dia manan-jo hahazo ny aorian'ny-varotra fanompoana ho an'ny fiainana.
Raha Manana Any Zavatra Takina
Mba andefaso olona antsika amin'ny andro
Taorian'ny-varotra fanompoana HOTLINE: + 86-595-22356770 na aorian'ny-varotra fanompoana E-mail ho an'ny mpanjifa vahiny: aftersales@qunfeng.com na aftersale01@qunfeng.com
isika hanao ny ezaka rehetra mba hamahana ny olana. Ny fahombiazana dia hanampy vaovao voninahitra ho antsika!
Misaotra anao noho ny fiaraha-miasa amin-kitsimpo!
Automatic Brick Making Machine, block making machine, Automatic Hollow Brick Machine, Brick Press Machine,